Air duct igwe, Refrigeration tube igwe, Waya akpụ igwe, Pu ụfụfụ igwe-BOBO Machine Co., Ltd.
BOBO Machine Co., Ltd. chọta na Nantong City, Jiangsu Province, naanị banyere 2 awa \_ 'mbanye si Shanghai Pudong International Airport. anyị, ọhụrụ ike 2010, na-pụrụ iche na ụgbọ ala na ụlọ ọrụ igwe, HVAC duct igwe, etc, Pu ụfụfụ igwe, na dị iche iche iche iche nke metal nhazi ígwè.
Anyị na-agbalị kasị mma anyị na-enye gị àgwà igwe na asọmpi price na ọkachamara mgbe-ire ọrụ. BOBO Machine gị ga-abụ ihe kasị pụrụ ịdabere na ígwè ngwọta soplaya na China. Anyị dị njikere igosi a ogologo azụmahịa mmekọrịta gị kpọrọ ụlọ ọrụ dị ka a soplaya, a na onye òtù ọlụlụ na otu enyi. Obi ụtọ na-ekele unu site n'ụwa nile.
Ị nwere mmasị ị
ịmụtakwu banyere BOBO Machine ngwaahịa na ngwọta?
BOBO Machine nwere 5+ afọ nke ahụmahụ na-enye ọtụtụ ebe na ọpụrụiche ọrụ na-arụ ọrụ e depụtara n'okpuru ebe.
ikuku duct igwe
The HVAC ventilashion ikuku duct igwe na-bụ-eji maka galvanized gburugburu gburugburu duct akpụ na n'ikpere aka duct Ndinam, square na akụkụ anọ ikuku duct-eme na Flange Ndinam, na-agbanwe na ọkara isiike aluminum foil duct akpụ maka mpio anwụrụ ọkụ na mgbanwe njikọ nzube, na oval ikuku duct akpụ ọrụ. Ọzọkwa ihe ngwọta maka ulo oru Fans, dị ka axial ofufe Flange, mgbịrịgba ọnụ Flange, shroud Flange spinning na eruba akpụ usoro.
Na friji tube igwe
The na friji ulo oru igwe-bụ-eji maka izipu na tube hulite na ịcha, ọla kọpa aluminum na bundy ígwè tube serpentine ekwe, tube ọgwụgwụ akpụ na ịdị na shrinking, nwekwara ndị waya tube eguzogide ịgbado ọkụ, ọla kọpa na aluminum tube njikọ ịgbado ọkụ, nku azu stamping, nku azu itinye n'ọnọdụ na ịgbasa usoro maka condenser, evaporator, igwe okpomọkụ ahụ na okpomọkụ Exchanger ngwa ọrụ.
Pu ụfụfụ igwe
Polyurethane ụfụfụ igwe na ọtụtụ-eji n'ihi na mgbidi na roofing thermal mkpuchi, waterproof mkpuchi spraying ọrụ, na-eṅomi osisi ngwá ụlọ, elu resilience Pu ụfụfụ, ngwa ngwa rebound ụfụfụ, ezinụlọ ngwa (friji, friza, mmiri okpomọkụ), thermal gwara mmanụ ụlọ ihe, ụgbọala interiors ụfụfụ injection ọrụ, na ụfụfụ nkwakọ, anyanwụ mmiri okpomọkụ tank mkpuchi ụfụfụ agbapụtara na perfusion ọrụ, na ikuku nyo, Herọd Pu gasket akara ngwa.
Waya akpụ igwe
The waya warara akpụ igwe nwere ike iche iche nke mkpakọ spring, torsion spring, erughị ala spring, ogologo spring, ụlọ elu spring, pullback spring, abụọ ighikota spring, rektangulu spring, clockwork spring, fancy spring, nkwarụ mmiri na ndiiche spring, gbọmgbọm hoop, igba mkpọchi mgbanaka, hanga nko, ịwụ handle, strapping ikechi, ígwè eriri igwe onu nchedo nkuku na ndị ọzọ pụrụ iche ahaziri waya warara forms.
Gburugburu anwụrụ igwe
The gburugburu anwụrụ igwe pụtara anwụrụ mere si ígwè warara waya na gburugburu asọfe na-akpụ usoro, dayameta nso si 10-3000mm, maka ngwa dị iche iche dị ka ewu corrugated posttension anwụrụ Ndinam, drainage wụrụ kọnkịrị anwụrụ Ndinam, ịsa na cable nchedo metal mgbanwe sooks Ndinam, akara cable elu casing conduit Ndinam na nyo isi tube gburugburu akpụ na na.
Wheel rim igwe
Nchara wheel rim igwe na-pụrụ iche e mere maka njem ụgbọ ala, ụgbọala na-akọ ugbo traktọ tubeless na ngalaba wheel rim Ndinam. Isi usoro dị ka wheel rim mpịakọta ekwe, flash butt ịgbado ọkụ, mpịakọta na-akpụ igwe, ịdị na ịgbasa usoro maka tubeless wheel, na haịdrọlik blanking, miri ịbịaru, igba akpụ spinning usoro maka n'akụkụ diski Ndinam, nwekwara akpaka ịgbado ọkụ na airtightness ule maka wheel na diski Nzuko na nnyocha na-arụ ọrụ.
10yeras ahụmahụ raara na ígwè trading
Otu onye service.One kọmishọna bụ karịsịa na-elekọta site na mmalite ruo ọgwụgwụ
One-nkwụsị ọrụ, Nye mmepụta akara akwado na integrated nhazi professionally
Esenidụt ọrụ dị
Ekele Nantong n'ibu na ọkụ technology co.!
on Jun.29,2018, 5 ọbịa si Keystone, USA mere a nleta ugboelu, anya gburugburu ugboelu ọhụrụ mmepụta osisi. Nke ...
Gburugburu tubeformer kpaliri ígwè duct akpụ igwe BTF usoro ka US
gburugburu tubeformer igwe ...